समाजसेवी डा. गिर रोदन महरासहित साढे तीन सय जना भन्दा बढी युवाहरू माओवादी केन्द्र मा प्रवेश - Himali Patrika	समाजसेवी डा. गिर रोदन महरासहित साढे तीन सय जना भन्दा बढी युवाहरू माओवादी केन्द्र मा प्रवेश - Himali Patrika
समाजसेवी डा. गिर रोदन महरासहित साढे तीन सय जना भन्दा बढी युवाहरू माओवादी केन्द्र मा प्रवेश
Himali Patrika प्रकाशित मिती - २४ बैशाख २०७९, शनिवार
घोराही, २४ वैशाख । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा तीन सय ६५ जना युवाहरु नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश रेग्मी र समाजसेवी युवा गिररोदन महाराको विशेष पहल र समन्वयमा युवाहरु माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पार्टीमा विगतमा काम गरेका तर, पछिल्लो समय स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका समाजसेवी डा. गिर रोदन महरा सहितका युवाहरु पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । दाङका चर्चित कलाकार हिमालयन रोडिजका उत्कृष्ट टप फाइभमा पर्न सफल युवा रामचन्द्र केसी पनि माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले माला र अबिर लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका महराले राजनीतिमा युवाहरुको प्रवेश निकै सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीले नै युवाहरुलाई पार्टीमा स्थान दिने गरेको बताउनुभयो । महराले युवाहरुले नै राजनीतिलाई सुधार गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादी घोराही नगर उपाध्यक्ष खिमबहादुर चौधरी अटलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव भागिदास चौधरी साकारले गर्नुभएको थियो ।